SOMALITALK - CANADA/USA
WARARKA SOOMAALIDA WOQOOYIGA AMEERICA
TORONTO: Cajalad Vedio ah oo laga Duubay nin Booliis ah oo Feeraya Wiil Soomaaliyeed
ALEXANDRIA: Soomaali Xabsigii Loo Sii Kordhiyey Kaddib Markii uu Rafcaan Ku Weydiistey in Xabsiga Laga Khafiifiyo
MINNEAPOLIS: Abbe Soomaaliyeed oo Lagu Soo Oogey Dacwad la Xiriirta Dhimashadii Gabadhiisii Lixda Bilood Jirtey
MINNEAPOLIS: Ninkii Diley Mohamed Ahmed Salah oo Lagu Xukumay 27 sano oo Xarig ah
MINNEAPOLIS: Somali-Canadian Lagu Xiray Minneapolis
Somali-Canadian Lagu Xiray Minneapolis,
& Xaaskiisa oo Beenisey in uusan wax lug ah ku lahaa argagixisada
Fartun Farah, sawirka waxaan ka qaaday Kare11 TV
Wargeys ka soo baxa magaalada Minneapolis ayaa maanta (dec 12) magcaabay nin Soomaaliyeed oo lagu xiray Minneapolis, kaas oo sida wargeysku looga shakiyey Al-Qaida. Magaciisuna waa Mohammed A. Warsame, oo da'diisu tahay 30-jir, waxana uu arday ka yahay Minneapolis Community Technical College, waxana uu haystaa dhalasha dallka Canada, wuxuuna asal ahaan kasoo jeedaa Soomaaliya.
Waxaa wargeyskaas oo lagu magcaabo StarTribune waxa uu sheegay in Mohammed A. Warsame loo xiray arimo la xiriira aqoon uu u leeyahay Zacarias Moussaoui oo loo xiray Sept.11.
Fartun Farah oo ah xaaska Mohammed A. Warsame oo galabta ka hadashay shir jaraa'id waxa ay sheegtay in aan ninkeedo wax xiriiri ah la lahayn Al-Qaida.
Fartun oo ay u xiran yihiin muraayadaha indhaha oo madow iyo khimaar madow oo ku dedan madexeeda waxa ay tiri: waxaan aad u argagaxay markii ninkaygu isoo wacay Isniintii oo ii sheegay in la xiray.
Dadka ka qayb galay shirkii jaraa'id ee 12/12/03
Afhayeen u hadlayey wasaaradda arimaha dibadda ee Canada oo lagu magcaabo Reynald Doiron ayaa Ottawa ka sheegay in laba sarkal oo ka socda qunsuliyadda Canada ay Maxamed Warsame kusoo booqdeen xabsiga uu kujiro ee Minneapolis, laakiin afhayeenku wax faahfaahin ah arintaas kama bixin, waxana uu intaas ku daray in Maxamed Warsame uu weydiistey arimo gaar ah (shakhsi ah) in ay ka gaarsiiyaan xaaskiisa. Sidaas waxaa weriyey CP oo ah warbaahinta Canada.
Waxaa wararku intaas ku dareen mar xaaska la weydiiyey in ninkeedu aqoon u lahaa Moussaoui, waxa ay Fartuun Farah sheegtay in aysan in aysanba weligeed maqal Moussaoui.
Sida uu cadeeyey afhayeenka wasaarada arimaha dibada Canada, Talaadada soo socota ayaa maxkamad dhegeysi ah la keeni doonaa Maxamed Warsame , taas oo ka dhici doonta Minneapolis, maxkamadaas oo la xiriirta dhegeysi in loo gudbiyo New York City iyo in kale.
Tarjumadii SomaliTalk.com | Dec 12, 2003
Daawo halkan ama halkan
[XUSUUS: Si aad Vedio-ga u daawatid waxaad u baahan tahay WindowsMedia Player]
Arintani waxa ay ka dhacday xaafadda magaalada Toronto markii ay taariikhdu ahayd Aug. 4, 2003, waxana Vedio-ga la faafiyey maanta oo December 12, 2003.
"Kawarama haddii aan Fiidiowgan la duubi lahayn, maxaa igu dhici lahaa" Jaamac
Jama Said Jama
Waa jaamac markii iligu ka dhacay.
Soomaali lagu soo eedeeyey in uu u gacan qaaday nin ka tirsan booliska Toronto ayaa hadda rajaynaya in fiidiyow laga duubay uu cadayn doono in uusan wax dembi ah lahayn.
Jama Said Jama, oo 21-jir ah, ahna "landed immigrant" ka yimid Soomaaliya, waxa uu sheegay in bishii August asagoo kala dhicinaya dhallinyaro dagaalamaysa in goobta ay booliis yimaadeen.
"Sarkaal booliis ah ayaa igu yiri 'halkan imow' markii uu kasoo baxay gaariga" ayuu yiri Jaamac, "Markaas ayaan istaagey, markaas ayuu booliiskii qoorta intuu i qabtay uu feer igu dhiftay" ayuu yiri Jaamac.
"Kaddib osla askarigaas ayaa i qabtay, oo dhulka igu dhuftay, kaddibna igu bilaabay feer madaxa ah, taas oo sababtay in ilig iga dhacay".
Vedio uu duubay qof meesha taagnaa ayaa muujinaya in Jaamac la feeray.
Intii ka horeysey Arbacadii lasoo dhaafay, salkaalka booliiska ah wax war ah uma hayn in filim laga duubay, waxana uu sarkaalku sheegay wax aad uga duwan waxa uu fiidiyowgu muujiyey.
Booliiska oo feeraya Jamac
Qoraalka uu sarkaalku ka qoray wiilka waxaa ku cad in uu sarkaalku yiri waxaan gacanta qabtay (Jaamac), anigoo keenaya gaariga dhinaciisa, laakiin feer ayuu soo gamey asagoo igu dhiftay. Markaas sarkaalku wax war ah uma hayn in filimka laga duubayey uu muujinayo in qofka feerka wax ku dhuftay uu yahay sarkaalka qudhiisa.
Filimka waxaa duubay qofka aan wax aqoon ah u lahayn Jaamac iyo sarkaalka booliska midna, waxana filimku muujnayaa in Jaamac uusan wax dhaawac ah wajigiisu lahayn kahor feerka uu vedio-gu muujiyey booliska oo feerka qababdsiiyey jaamac.
Waxa booliisku sheegeen in jaamac uu iligu kaga dhacay dagaalka ka horeeyey intiiba aan booliisku iman. Waxana TV-gu maanta muujiyey Jaamac oo gacanta ku wata iligii ka dhacay.
Jaamac waxaa markii hore lagu soo eedeeyey in uu sarkaalka farasaaray, haddii eedayntaas lagu heli lahaana waxaa loo diidi lahaa dhalashada Canada, waana la tarxiili lahaa. Laakiin waxa uu Jaamac rajaynayaa in Vedio-gani uu arintaas si degdeg ah u dhamayn doono. Qareenka Jaamacna waxa uu yiri fiidiyowgani waa cadayn aad muhiim u ah.
Waxaa telefishanka lagu magcaabo CTV uu sheegay in laga yaabo Jaamac in uu dacweeyo saraakiisha booliska.
Jaamac waxa uu Soomaaliya ka yimid sannadkii 1995, gaar ahaan magaalada Muqdisho sida uu shegay qareenkiisu.
ISHA: CTV- CANADA
Wararka ka imanaya magaalada ALEXANDRIA, Va, ayaa sheegay in Soomaali weydiistey in xabsiga laga dhimo ay maxkamadi Jimacadii (12/12/03) ku xukuntay xabsi kii hore afar laab ka badan.
Abdillah Abdi waxaa uu xabsiga ku jiri doonaa 37 bilood, halka uu adeerkiis oo magaciisa la yiraahdo Abdirahman Sheikh-Ali Isse uu xabsiga ku jri doono 18 bilood, taas oo ah xabsi la xiriira lugtii ay ku lahaayeen al-Barakat, waa sida warku u dhigaye.
Abdillah Abdi iyo Abdirahman Sheikh-Ali waxaa markii hore xabsiga lagu xukumay bishii September 11 ee lasoo dhaafay, markaas oo Abdillah Abdi lagu xukumay 10 bilood, halka Abdirahman Sheikh-Ali markaas lagu xukumay 18 bilood.
Said Moussa Gouleed
Sida ay faafisay jariidada PioneerPress oo kasoo baxda Minnesota, waxaa maanta 12/12/03 dembi lagu soo oogey Said Moussa Gouleed dacwadaas oo la xiriirta dhimashadii gabadhiisii yarayd ee Lixda toddooba jirka ahayd ee sida uu sheegay ka dhacday sidaasna ku dhimatay Nov. 9, 2002, balse maxkamadu ay ku mudacdey in aysan sidaas u dhiman.
Warar kale oo kusoo baxay jariidada StarTribune ayaa sheegay in Saciid oo markii hore damaanad ku joogey in la amro in la xiro ilaa laga gaarayo 15ka Janaayo 2004, markaas oo la hor keeni doono maxkamada dhegeysanaysa xakumidiisa.
Wararkii dabayaaqadii sannadkii hore kasoo baxay dhimashada gabadhan yar ayaa sheegayey in ay ka dhacday aabaheed oo say sidaas ku dhimatay. eeg warkaas hore..
ISHA: PioneerPress / StarTribune
Maxkamad kutaal magalaada Minneapolis ayaa 27 sano oo xabsi ah ku xukuntay ninkii diley Taxi wadihii Soomaaliyeed.
Salvador Anthony Pacheco ayaa qirtay in uu si bareer ah u diley Maxamed Axmed Saalax oo Taxi wade ka ahaa magaalada Minneapolis.
Dhanka kale ninkii bishii July ee isla sannadkan diley Axmed Xuseen Axmed oo magaciisa la yiraahdo Sylvester Scott ayaa waxaa maxkamad lasoo taagi doonaa bisha Febraayo ee 2004.